Haisi Mhosva Yavo, Ndeyako | Martech Zone
Muvhuro, Nyamavhuvhu 21, 2006 Chipiri, August 22, 2006 Douglas Karr
Ndinozviwana ndiri pakati pebhuku binge zvakare, ndine mana mundiro yangu izvozvi.
Ndakasimudza Diki ndiro Nyowani Huru, naSeth Godin, vhiki ino. Ndiri kutonakidzwa nazvo kunyangwe Mr. Godin akanditora nekushamisika. Dai ndakaverenga zvishoma nezve iro bhuku, ndingadai ndakaona kuti izvo zvinyorwa muunganidzwa webasa rake… ndinofunga zvakafanana nekuteerera kune 'Greatest Hits', zvinonakidza kunzwa nziyo dzese… asi uchishamisika kuti sei usina 't ingoteerera ma cd ese awanga uine pasherefu.
Pakupera kwezuva, ndakanganwa zvakawanda zve zvandakaverenga kana kunzwa kubva kuna Mr. Godin. Ndicho chimwe chinhu isu tese chinotambura nacho. Zvakawanda sei zvebhuku rega rega zvaunoyeuka? Neraki, ini ndinotenga akaomarara nekuti ini ndinowanzo tora mabhuku ekare uye ndinotarisa mukati mawo kukurudzira uye mazano. Iri nderimwe remabhuku iwayo. Kana ndikangotora bhuku iri ndoverenga ndima yandiri kuda kutaura nezvayo, ichave yakakosha kagumi pane zvandakabhadhara.
Mr.Godin munyori ane tarenda anoshamisa - anowanzoisa mamiriro akaomesesa mumazwi akareruka aunogona kuteedzera. Kwete yakawanda yevamwe vanyori vanokurudzira nzira yaanoita. Uye ndine chokwadi chekuti hapana vamwe vanyori vakawanda vane zvinotevera zvinoitwa naVaGodin. Kuverenga kwake hakukuudze izvo zvauri kuita zvisina kunaka kana kurudyi, anongobvunza iyo mibvunzo uye ataura zvinhu zvinoita kuti utarisane nemamiriro ako ezvinhu mberi.
Papeji 15, Seth anoti:
Kana vateereri vako vasiri kuteerera, haisi mhosva yavo, ndeyako.
Izvo zvinogona kunge zvisingaite kunge hombe Wow, asi ichokwadi. Chirevo chinogona kushandurwa kuita dzinoverengeka nzvimbo dzakasiyana:
Kana vatengi vako vasingakwanise kushandisa software, haisi mhosva yavo, ndeyako.
Kana tarisiro yako ikasatenga chigadzirwa, haisi mhosva yavo, ndeyako.
Kana vakasashanyira webhusaiti yako, haisi mhosva yavo, ndeyako.
Kana vashandi vako vasiri kuteerera, haisi mhosva yavo, ndeyako.
Kana mukuru wako asingateereri, haisi mhosva yavo, ndeyako.
Kana chikumbiro chako chikasashanda, haisi mhosva yavo, ndeyako.
Kana mumwe wako asiri kuteerera, haisi mhosva yavo, ndeyako.
Kana vana vako vasiri kuteerera, haisi mhosva yavo, ndeyako.
Kana usiri kufara, haisi mhosva yavo, ndeyako.
Ini ndinofungidzira kuti poindi ndeyekuti, chii iwe kuita nezvazvo? Seth anoenderera mberi:
Kana imwe nyaya isiri kushanda, chinja zvaunoita, kwete kuti unopopota sei (kana kuchema).
Chinja zvaunoita. Une simba rekuchinja. Shanduko hazvireve kuti iwe unofanirwa kuzviita wega, zvakadaro. Kumbira rubatsiro kana uchida.
Haisi Effort inoshamisa Vanhu